हार्ट ट्रान्सप्लान्ट, वर्ल्डवाइड चर्च अफ गॉड स्विट्जरल्याण्ड (WKG)
नयाँ वर्षमा नयाँ मुटुको साथ!
जोन बेलले यस्तो काम गर्ने अवसर पाए जुन हामी मध्ये अधिकांशले कहिल्यै गर्न सक्नेछैनौं भन्ने आशा राखेका थिए: उनले आफ्नै मुटु आफ्नो हातमा लिए। दुई बर्ष पहिले, उनले हृदय प्रत्यारोपण गरे जुन सफल थियो। डलासको बेल्लर युनिभर्सिटी मेडिकल सेन्टरमा हार्ट टु हार्ट कार्यक्रमलाई धन्यवाद छ, अब उसले आफ्नो मुटु समात्न सक्षम भयो जसले replaced० बर्षसम्म उसको जीवनलाई सुरक्षित राख्नुपर्‍यो र यसलाई बदल्न आवश्यक पर्‍यो। यस अचम्मको कथाले मलाई मेरो आफ्नै हृदय प्रत्यारोपणको सम्झना गराउँछ। यो कुनै "शारीरिक" हृदय प्रत्यारोपण थिएन - सबै जो ख्रीष्टलाई पछ्याउँछन् तिनीहरूले यस प्रक्रियाको आध्यात्मिक संस्करणको अनुभव गरेका छन्। हाम्रो पापी स्वभावको क्रूर वास्तविकता यो हो कि यसले आत्मिक मृत्यु ल्याउँछ। भविष्यवक्ता यर्मियाले यसलाई स्पष्टसँग भनेका थिए:aमुटु विद्रोही र हताश चीज हो; यसलाई कसले जान्न सक्छ? :S: यो स्थायी बिरामी छ]? » (Jer.17,9)।
जब हाम्रो आध्यात्मिक "हृदय को समारोह" को वास्तविकता संग सामना, यो अझै आशा छ कि कल्पना गर्न गाह्रो छ। हाम्रो अस्तित्वको शून्य छ। तर अचम्मको कुरा हाम्रोलागि हुन्छ: येशू हामीलाई आध्यात्मिक जीवनको लागि सम्भव अवसर प्रदान गर्नुहुन्छ: हाम्रो अस्तित्वको गहिराइमा हृदय प्रत्यारोपण। प्रेरित पावलले यस उदार उपहारलाई हाम्रो मानवताको नयाँ जन्म, हाम्रो मानव स्वभावको नवीकरण, हाम्रो दिमाग परिवर्तन गर्ने र हाम्रो इच्छाको मुक्ति भन्ने वर्णन गर्दछन्। यी सबै उद्धार कार्यको एक अंश हो जसमा परमेश्वर पिताले आफ्ना पुत्र र पवित्र आत्मा मार्फत काम गर्दै हुनुहुन्छ। सबै समावेशी मुक्तिको साथ, हामीलाई हाम्रो नयाँ, स्वस्थको लागि उसको पुरानो, मृत हृदयको आदानप्रदान गर्ने अद्भुत अवसर दिइन्छ - उसको प्रेम र अमर जीवनले भरिएको हृदय। पावलले भने: «हामीलाई थाहा छ हाम्रो बुढो मानिस उहाँसँगै क्रूसमा टाँगिएको थियो ताकि पापको शरीरलाई नष्ट गरियोस् र हामी अब पापको सेवा गर्दैनौं। जो मर्दछ ऊ पापबाट स्वतन्त्र भएको छ। तर यदि हामी ख्रीष्टसँगै मरेका छौं भने, हामी जान्दछौं कि हामी पनि उहाँसँगै बाँच्ने छौं। (रोमी .6,6.२8-२XNUMX)
परमेश्वरले ख्रीष्टमार्फत अचम्मको साथ साटासाट गर्नुभयो त्यसैले उहाँमा हामी नयाँ जीवन पाउन सक्छौं जुन उहाँ पिता र पवित्र आत्मासँगको स fellow्गतिमा बाँडिन्छ। नयाँ वर्षमा प्रवेश गर्दा हामी यो याद राखौं कि हाम्रो जीवनको प्रत्येक दिन हामीलाई बोलाउनेको अनुग्रह र भलाइ मात्र पाउँदछौं - हाम्रा प्रभु र उद्धारक, येशू ख्रीष्टलाई!